mercredi, 17 juillet 2019 22:09
Lalaon’ny Nosy 2019: Hanainga rahampitso Alakamisy tolakandro ny delegasiona malagasy
Rahampitso Alakamisy 18 jolay 2019 tolakandro no hiazo an’ny nosy Maorisy ny delegasiona Malagasy hiaro ny voninahi-pirenena mandritra ny lalaon’ny Nosy andiany faha-X, hotanterahina ny 19 ka hatramin’ny 28 jolay 2019. Ny Minisitry ny tanora sy fanatanjahantena Tinoka Roberto no hitarika ny delegasiona.
Efa nialoha lalana omaly ny andiany voalohany, ahitana ireo mpikarakara ny fahatongavan'ny delegasiona any Maorisy sy ny mpilomano.
Nofaranana androany ny fizarana ny fampitaovana an'ireo Atleta solontena Malagasy.
mercredi, 17 juillet 2019 22:04
Antenimierandoholona: Valo ny isan’ireo Filoha nifandimby nitantana an’ity Andrimpanjakana ity
60 taona ny Antenimierandoholona. Hankalazaina mandritra ny herinandro manomboka ny 22 ka hatramin’ny 27 jolay 2019 ho avy izao izany.
Miisa valo ireo Filoha nifandimby nitantana an’ity Andrimpanjakana mpanao lalàna ity tao anatin’izay 60 taona izay.
- Gabriel Rajaonson (1959-1960)
- Jules Ravony (1960-1963)
- Siméon Japhet (1964-1972)
- Honoré Rakotomanana (mey 2001-jolay 2002) - (febroary 2016-oktobra 2017)
mercredi, 17 juillet 2019 21:37
Antenimieram-pirenena: Noraofin’ny IRD avokoa ny toeran’ny filoha lefitra, nanjaka ny miralenta
Voafidy ny tolakandro teo teny Tsimbazaza ireo filoha lefitra enina, isany mandrafitra ny Birao maharitry ny Antenimieram-pirenena.
Rasolonjatovo Honoré ho an’ny Faritanin’Antananarivo ; Solombavambahoaka voafidy tao amin’ny Distrikan’i Faratsiho, Faritra Vakinankaratra izy.
Rahelihanta Jocelyne, ho an’ny Faritanin’Antsiranana ; Solombavambahoaka voafidy tao amin’ny Distrikan’Antsiranana I, Faritra DIANA izy.
Rahantanirina Lalao ho an’ny Faritanin’i Mahajanga ; Solombavambahoaka voafidy tao amin’ny Distrikan’i Mahajanga I, Faritra Boeny izy.
Razafintsiandraofa Jean Brunelle ho an’ny Faritanin’i Fianarantsoa ; Solombavambahoaka voafidy tao amin’ny Distrikan’i Ikongo, Faritra Vatovavy Fitovinany izy.
Michelle Bavy Angelica ho an’ny Faritanin’i Toamasina ; Solombavambahoaka voafidy tao amin’ny Distrikan’i Fenoarivo Atsinanana, Faritra Analanjirofo izy.
mercredi, 17 juillet 2019 21:25
Kitra - CAN 2019: Anio alina ny famaranana kely
Hanao famaranana kely anio alina i Tonizia sy Nizeria, hiady ny laharana fahatelo amin’ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra, andiany faha-32, izay tanterahina any Egypta.
Nahilik’i Sénégal tamin’ny isa tokana 1 noho 0 i Tonizia teo amin’ny manasa-dalana, resin’i Alzeria 2 noho 1 kosa i Nizeria.
mercredi, 17 juillet 2019 21:06
Antsirabe: Nodorana ireo entana simba sy lany daty tratra
Notontosaina androany ny fanapotehana sy fandoroana ireo entana simba sy lany daty sarona taty Antsirabe, ny 04 jolay 2019 teo, nandritra ny fanaraha-maso nataon’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny ministeran’ny indostria, varotra ary asa tanana Antsirabe, renivohitry ny faritra Vakinankaratra.
Entana aman-taonina nahitana menaka, vary, lafarina, paty, ronono mandry amin’ny boaty ary voatabia amin’ny boaty, lafarina 660 kitapo amin’ny 50kg efa simba no tratra tao amin’ny trano fanatobiana entan’ny mpandraharaha karana iray tao an-toerana tamin’io, izay nifangaro tamin’ireo vokatra simika.
Nogiazana avy hatrany ny entana ary izao nopotehina sy nodorana ampahibemaso izao.
mercredi, 17 juillet 2019 20:49
Zandarimaria - Atsinanana: Fankasitrahana sy fampitaovana
Notolorana taratasy mari-pankasitrahana, ny 15 jolay teo, ireo Zandary maherifo nandray anjara tamin'ny fanavotana olona nalaina an-keriny tao Toamasina tamin'ny volana novambra 2018.
Nandritra io fotoana io ihany koa no nandraisina ny fiara 4X4 vaovao roa ho an'ny Vondrotobim-pileovan’ny Zandarimaria - Atsinanana.
mercredi, 17 juillet 2019 20:12
Lalaon’ny Nosy - Taranja lomano: Orinasa maro no mifarimbona manohana
Niainga omaly hariva niazo ny nosy Maorisy ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny taranja lomano hiaro ny voninahi-pirenena amin'ny Lalaon'ny Nosy andiany faha-X, hotanterahina ny 19 ka hatramin’ny 28 jolay 2019.
Nialoha ny niaingana dia nandray tso-drano sy vatsy avy amin'ny ministeran’ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana, sy ireo orinasa mpanohana, nahitana ny vondrona Taloumis, BIG, Chocolaterie Robert, Allianz, IPC, SIRAMA, ary avy amin-dRamatoa Minisitra Lantosoa Rakotomalala ny delegasiona.
mercredi, 17 juillet 2019 20:11
Melvin Adrien: Atsy La Réunion mihaona amin’ireo mpanohana Barea
Mandalo ao La Réunion, misy ny ray aman-dreniny i Melvin Adrien, mpiandry haraton’ny Barea an’i Madagasikara, sy ireo mpilalao ao amin’ny Barea hafa tamin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika andiany faha-32 tany Egypta.
Hisy ny fihaonan’izy ireo mivantana amin’ireo mpanohana ny Barea rahampitso alakamisy 18 jolay 2019, manomboka amin’ny 4 ora ka hatramin’ny 6 ora hariva any an-toerana, karakarain’ny Consulat Général de Madagascar ao La Réunion, hatao ao amin’ny CREPS. Hisy fiarahana maka sary mandritra izany.